के तपाई गलत कृत्यको विरोध गर्नुहुन्छ ?
“All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.” :- Edmund Burke
आइरिस लेखक, विचारक र राजनैतिक सिद्धान्तकार अनि दार्शनिकका रूपमा प्रसिद्ध एडमन्ड बर्कले कतै भनेका छन् :“दुष्टले विजय पाउने एउटै शर्त हो असल मानिसले केही नगर्नु” । हरेक पल्ट कुनै गलत कार्य वा प्रक्रिया हावी हुने अवस्था आउँदा मलाई यही वाक्यको याद आउँछ । अनि देश काल र परिस्थिति जे जस्तो रहे पनि यो वाक्यको गुणात्मक सत्यतामा कुनै फरक आएको छैन् । जुन सुकै समाज, देश वा परिवेशमा पनि खराव नियत र क्रियाकलापको बर्चस्व असल कार्य वा चरित्रको प्रकटन नहुन्जेलसम्म मात्रै रहन्छ ।
प्रसङ्ग केही समय अगाडि नेपालका गैह्र जिम्मेवार र निर्लज्ज नेताहरूले गरेका पूर्व राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री अनि अन्य विशिष्टहरूले पाउने आजीवन सुविधाको हो । उसै पनि गरिब देश, त्यसमाथी अन्तरिम संविधान र सङ्क्रमण कालमा गुज्रिरहेको मुलुक । अनि ति सबैभन्दा माथि छिन-छीनमा सरकार र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नियुक्ति फेर बदल भइ रहने देश । यस्तो देशले धान्नै नसक्ने त्यो व्ययभार र सिधै भन्दा जनमारा अध्यादेश कुनै हालतमा पनि पास गर्नै नहुने थियो । तर पद पैसा र सुविधाको हवसमा निर्लिप्त सबै दल, नेता र यहाँ सम्म कि नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले समेत विना सङ्कोच त्यो अध्यादेश पारित गरे (खान पाउने कुरामा यहाँ कुनै राजनैतिक मतभेद कहिल्यै रहेको थिएन पनि ) । जे होस काले- काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने पारामा देशको ढुकुटी रित्याउने कुरामा देशका सबै दल र नेताको एकबद्धता देखियो।
कुरो हुनै नहुने, गर्नै नहुने र सोच्नै समेत नहुने थियो । तर दुष्टताको एकमत भएको थियो र यो सोच्न समेत नहुने कुरा कार्यान्वयनको सँघारमा समेत पुग्यो । देश र जनताको विकास र सेवा गर्छु भनेर राजनैतिक रङ्गमञ्चमा भेडाको छाला ओढेर छिरेका ब्वाँसोहरू गदगद भए। एक महिना, एक हप्ता वा एक दिन मात्रै भए पनि सो ‘विशिष्ट’ पदमा पुगेकाहरूको बीचमा खुसीका तरङ्ग दौडिए र देश भत्किए भत्कियोस, डुबे डुबोस भन्ने मनसायका साथ देशको डाडु पन्यौ लिएकाहरू देशको ढुकुटीमा नङ्ग्रा गाढन तयार भए । सत्ता लोलुप र द्रव्य पिशाचहरू विजयी मुस्कानका साथ देखिए।
यो सब त्यतिबेला सम्म मात्रै टिक्यो जबसम्म असल व्यक्तिले आफ्नो अस्तित्व जनाएनन् । त्यो अत्यन्त गलत कार्य भएकोले बोल्नेले बोले, लेख्नेले लेखे र विरोध गर्नेले आ-आफ्नो ठाउँबाट विरोध गरे । स्मरण रहोस, यो ब्लगरले पनि सो कार्यको विरोध स्वरूप करिव साढे तीन महिना अगाडि एउटा पोस्ट लेखेको थियो । अन्तमा यो कार्यले 'नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न अध्यादेश बनाउने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र त्यसलाई लाहछाप लगाएर वैधानिकता दिने राष्ट्रपति दुवै दोषी' भएको रिट समेत हाले भरतमणि जंगमले । यसरी दुष्ट जमातको सक्रियता असल चरित्रको अभिव्यक्ति पछि कमजोर भयो अनि सर्बोच्च अदालतले तदारूकताका साथ यो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अन्तत: गलत कार्यले विजय पाउने शर्त धुजा-धुजा भयो र केही सामान्य मानिसहरू सक्रिय हुने बित्तिकै असत्यको हार भयो ।
कुरो यत्ति मात्रै हैन, नेपालको इतिहास र राजनैतिक घटनाक्रमले बारम्बार यसलाई प्रमाणित गरेको छ । आफुलाई ठालु ठान्ने दलले गरेको अनिश्चित कालिन बन्द केही असल व्यक्तिहरूको बसन्तपुरमा जमघट हुँदा हावा खाएको थियो । हत्याराहरूलाई आम माफी दिने सरकारी कुचेष्टा पनि केही असल चरित्रका व्यक्तिहरूको असहमतिमा असम्भव बनेको थियो । अनि विगतमा यस्तै यस्तै कैयन् गलत कृत्यहरू सही कोसिसका कारण असफल भएका छन् ।
समष्टिमा खराव प्रवृत्ति खराव आचरणको बाहुल्यले भन्दा नैतिक चरित्रको अभावमा मौलाउँछन् । त्यसैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सबैले आफ्नो आवाज उठाउनै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । खोटो सिक्का बिक्ने बजारमा असली मोहरले धक मान्ने, हिँसाले आकाश ढाक्न खओज्दा अहिँसाले खुम्चिनु पर्ने अनि झूठको खेती मौलाउन लाग्दा सत्यको स्वरले भयभीत हुनु हुँदैन् । मेरो विचारमा समाजमा खराव चरित्र देखेर असल स्वभावले हच्किने हैन् बरू असल कृत्यको अगाडि खराव करतूत डराउनु पर्छ । अनि असल हुनु भनेको जे-जे र जसो-जसो हुन्छ त्यो सहेर बस्नु वा त्यसको मुक दर्शक हुनु कदापि हैन् । किनकी असल व्यक्तिले आफ्नो असलपनको अभिव्यक्ति नगर्ने हो भने खराव आचरण समाजमा हावी हुन्छ नै । वा अर्को वाक्यमा भन्ने हो भने खराव तत्व त्यतिबेला मात्रै हावी हुनसक्छ जव असल तत्वको प्रकटन बन्द हुन्छ ।
त्यसैले :“गलत कार्यको विजय रोक्नु छ भने असल मानिसले केही गर्नु नै पर्छ” । के तपाई आफूलाई असल नागरिक सम्झनुहुन्छ ? के तपाई गलत कृत्यको विरोध गर्नुहुन्छ त ??
दूर्जेय चेतना 2/8/12 10:08 AM
साह्रै भद्र अनि उच्च बिचारले भरिएको लेख। साच्चै निकै घत लाग्दो लेख्‍‍नु भयो। सानै भए पनि आवाज उठाउन सकियो भने, अहिलेको संचारको युगमा ठूलै हल्ला हुदो रहेछ। बास्तबमा राम्रो र नराम्रो छुट्टाउन सक्नु पर्छ र नराम्रो कामको बिरोध र राम्रो कामको प्रशसा गर्न सक्नु पर्छ।
mani 2/8/12 12:19 PM
एकदमै सही बिचार ! मन पर्यो |
Bed Nath Pulami (Yumesh) 2/8/12 1:14 PM
निकै चित्त बुझ्यो दिलिप दाइका कुरा ... एक दम ! तपाइकै कुरा सापट लिए है .... "असल हुनु भनेको जे-जे र जसो जसो जसो हुन्छ त्यो सहेर बस्नु वा त्यसको मुक दर्शक हुनु कदापि हैन् । "
milan neupane 2/8/12 1:48 PM
awaking people by the post.heart touching
Aayush 3/8/12 10:34 AM
काले- काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने पारामा देशको ढुकुटी रित्याउने कुरामा देशका सबै दल र नेताको एकबद्धता देखियो । एकदम सहि कुरा
सूर्य/सिकारु 8/8/12 8:25 PM
लामो समय पश्चात दिलीप दाजुको ब्लगमा छिर्ने साइत जुर्यो। बिचार र अभिब्यक्तिलाई समय सापेक्ष प्रस्तुत गर्ने कलाको जति तारिफ गरेपनि कमै लाग्छ मलाई। सत्यको भारि बोकेर मात्र बस्नु कादापि उचित होइन यस्लाई समय अनुसार परिचालन गर्न सके ठुला कुराले पनि घुडा टेक्न बाध्य हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा माथिका बाक्यांशले उधृत गरिसकेका छन। बिचारले निकै गहिराइ छोएको पाए।